Sajhasabal.com |मैले देखेको ः सल्यानमा अझै अन्धविश्वास हटेको छैन्
सल्यान - SLN / साहित्य
मैले देखेको ः सल्यानमा अझै अन्धविश्वास हटेको छैन्
Posted on: 03 Mar, 2017
फागुन २५ गते १०७ औँ अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सल्यान खलंगाको टुडिखेलमा लोक गित प्रतियोगीता, कुर्सीदौड प्रतियोगीता, सडक नाटक र महिला हिसां विरुद्धको ¥यालि निकालीने महिला विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
यस विषयमा मेरो विचार र मैले देखेको ?
सल्यान सदरमुकाम खलंगामा जागिरको रुपमा काम गर्ने महिला दिदि बहिनिहरु धेरै हुनुहुन्छ । जागिरको रुपमा काम गर्ने महिला सायद शिक्षित नहुने कुरा पनि भए । अझ महिला विकास समितीमा काम गर्ने महिलाहरु पनि हुनुहुन्छ । ति महिलाहरुले सधै कुरा गर्नुहुन्छ महिला हिसां विरुद्धको आवाज हामि उठाउछौँ भनेर । तर एक दिनको कुरा हो खलंगामा खानेपानिको समस्या थियो । रेडियो बाट सहकर्मि साथि र म करिब १५ मिनेट ओरालो बाटो हिडेर काजिधारा भन्ने ठाँउमा पुग्यौँ जहाँ धेरै महिलाहरु एक गार्गी पानि भर्नको लागि लाइनमा बसेका थिए । केहि पुरुषहरु पनि थिए । ति मध्य धेरै जसो मैले चिनेका कर्मचारी महिलाहरु थिए । त्यतिखेर एकजना महिलाले भन्नुभयो “म छुइएकी छु मैले छोएको पानि खान हुदैन्” । म सँगै गएको सहकर्मी साथिले सोध्नुभयो “यो छुइएको भनेको केहो” । म चुप्प लागे किनकी मलाई थाहा थियो त्यो भन्दा तिन दिन अगाडी त्यहि ठाउँमा दुई ओटि महिलाले भगडा गरिरहेकी थिइन् । कारण थियो एउटी महिलाले कपडा धुईराखेकी थिइन र अर्की रजस्वला भएकी महिला आएर पानि भर्ने क्रममा कपडा छुइएपछि विवाद भएछ । ति महिलाको झगडा परिरहेको क्रमममा हामिहरु तिनओटा साथि थियौँ र कपडा धुने महिलालाई हामिहरुले भन्यौँ “तपाईहरु जस्तो जान्ने बुझ्ने मान्छेले यस्तो कुरा किन गर्नुहुन्छ दिदि हामिहरुको गाउँमा त यस्तो अन्धविश्वास हटिसक्यो तपाइहरु त अझ जिल्लाको सदरमुकाममा बस्नुहुन्छ, यस्तो कुरा गरेर झगडा नगर्नुहोस” भन्दा ति कपडा धुने महिलाले हामिलाई जवाफ दिइन “अन्धविश्वासको कुरा यहाँ हैन तिम्रो गाउँ तिर हुन्छ । यो यथार्त कुरा हो रजस्वाला भएको बेला कसैलाई छुनु हुदैन । उसले छोएको पानि पनि प्रयोग गर्नु हुदैन्” । यति सुनेपछि हामि पानि लिएर आफ्नो बाटो लाग्यौँ ।
अब कुरा आयो अगाडीको मेरो सहकर्मी साथिले सोधेको कुरा “छुइएको भनेको केहो” रु र म चुप्प लागेपछि ति महिलाले जवाफ दिइन तिम्रो घर कहाँ हो भाई । मेरो साथिले भन्यौँ मेरो घर सुर्खेत हो । ति महिला हाँसेर भनिन् तिम्रो आमा रजस्वाला भएको बेला घरमा खाना कसले पकाउछ साथिले भन्याँे आमाले नै पकाउनु हुन्छ । तर ति महिलाहरुले भनिन् गाउँबाट आएका भाइहरुले पनि गफ लगाउछन भन्दै हावामा कुरा उडाइन् ।
जिल्लाको सदरमुकाम जस्तो ठाउँमा बस्ने शिक्षीत महिलाहरु जो जागिरको रुपमा काम गर्छन् । ति महिलाहरु त यति पछाडी रहेका छन् । समाजमा रहेको अन्धविश्वास र कुरीतिको अझै जगेर्ना गर्छन् भने अन्य अशिक्षित महिलाहरुले के गर्छन् होला ।
अझैपनि हाम्रो समाजमा कुरीति अन्धविश्वास रहिरहेको छ । अन्धविश्वास हटाउनलाई कुनै गाउँ वा सहर चाहिदैँन मान्छेको मनमा हुनु पर्छ । सहरमा बसे भन्दैमा छोटो लुगा लगाउने, केटाले लगाएको सट पाईन्ट लगाउदैँमा, फेसन बदल्दैमा समाजिक अन्धविश्वास हटदैन् । अन्धविश्वास त मन बाट हटाउन सिक्नु पर्छ ।
यो बर्षको फागुन २५ गते १०७ औँ अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिवस सबै महिला दिदि बहिनी हरुले मनाउदैँ हुन्छ होला र सल्यान खलंगामा पनि मनाईदै छ । म पानि ल्याउन गएको बेला भेट भएकी ति महिलाहरु पक्कै पनि ¥यालिमा सहभागी हुनुहुन्छ होला । ति महिलाहरुलाई मेरो प्रश्ना छ तपाई अन्धविश्वास तोडौँ भनेर नारा लगाउनु हुन्छ की जगेर्ना गरौँ भनेर ?
१०७ औँ अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सबैलाई शुभकामना ।।।।।
राजनीति, देश र हाम्रो आठौँ महाधिवेशन